एकैघरका दाजुभाइ वडाध्यक्षका उम्मेदवार बने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एकैघरका दाजुभाइ वडाध्यक्षका उम्मेदवार बने
मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:२८ मा प्रकाशित !
गुल्मी (तम्घास), जेठ २३ गते । दोस्रो चरणमा आगामी असार १४ गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा गुल्मीमा एकै परिवारका दुई दाजुभाइ वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । मुसिकोट नगरपालिका–४ अन्तर्गत बडागाउँका यमबहादुर खत्री र ओमबहादुर खत्री दुईभाइ एकै पदमा उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् ।
उम्मेदवार दुई दाजुभाइमध्ये दाजु यमबहादुर खत्री नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट र भाइ ओमबहादुर खत्री नेकपा (एमाले) को तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको हो । एकै घरका दुई दाजुभाइलाई एकै पदमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएपछि उहाँहरुका आफन्त पनि दुईमध्ये कसलाई भोट दिने भनेर अन्योलमा परेका छन् ।
दुई भाइमध्ये दाजु यमबहादुर काँग्रेस बडागाउँको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ भने भाइ ओमबहादुर एमाले बडागाउँ गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
यसरी दुई भाइ एकै ठाउँबाट फरकफरक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि स्थानीय कसले बाजी मार्ला भनेर निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यी दुई दाजुभाइ गत दश वर्षअघि नेपाली सेनाबाट अवकाश पाएर फर्केपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।
PREVIOUS POST Previous post: ‘व्यक्ति सभ्य र अनुशासित हुनुपर्छ मानवाधिकारको प्रयोग गर्दा ’
NEXT POST Next post: अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकको कोटा खाली, सेवाग्राही मर्कामा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:२८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:२८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:२८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:२८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:२८